Ogaden News Agency (ONA) – Dagaal ka dhacay Goray oo u dhexeysa Jigjiga iyo Baabili iyo warbixino kaloo dheeraad ah
Dagaal ka dhacay Goray oo u dhexeysa Jigjiga iyo Baabili iyo warbixino kaloo dheeraad ah
Posted by ONA Admin	/ November 11, 2011
Dagaalkii ugu dambeeyay een helnay warbixintiisa ayaa dhacay shalay oy bishu ahayd 10/11/2011 iyadoo ay CWXO u galeen ciidamada cadawga Goray oo u dhaxysa Jigjiga iyo Baabili waxaana halkaas ka dhacay dagaal culus inta la ogyahya waxaa cadawga gaadhay khasaare balaadhan waxaana bilawgiiba dabka la saarayn laba baabuur oo uu lahaa cadawgu kuwaas oo iayaga iyo wixii saraaba la baabi’yay waxaa kale oo ay cwxo hawlgakan ku naafeeyeen islamarkaana cafawgu uu dib ka jiitay laba baabuur oo kale.
Waxaa ka socda daka gabi ahaantiisaba dagaalo xoogan oy CWXO ku qaadayeen fadhiisimada maleeshiyada Tigreega. Dagaaladaa oo si xowli ah uga socda guud ahaan dalka ayaa loogu gaystay ciidamada cadawga khasaare balaadhan oo isugu jira naf iyo maal. Dagaaladan oo ka dhacay meelo kala duwan oo dalka ka tirsan ayaa cadawga mooraal jab ku riday waxaana la sheegayaa inay meela badan dhexdooda ka dagaalamaan. Arintan ayaa timid markii ciidamada cadawga qaar ka mid ah ay diidaan inay hawlgal u baxaan ka dib markii ay la kulmeen weeraro iyo mir joogto ah oo u diiday xasiloonidii.
Warbixinada dagaalka een ka helnay Xarunta dhexe ee labadii todobaad ee la soo dhaafay lagu qaaday cadawga ayaa u dhacey sidan;
27/10/2011 Dagaal ka dhacay tuulada Dhuure oo ka tirsan degmada Qabri-dahr waxa cadawga laga dilay 2 askari waxaana lagaga dhaawacay 3 kale
30/10/2011 Dagaal ka dhacay Cumarada oo ka tirsan degmada Iimay bari waxaa cadawga lagaga dilay 2 askari
31/102011 Dagaal ka dhacay Warfaa- huuro oo ka tirsan degaana Barmiilka ee degmada Dhuxun waxaa ciidamada cadawga lagaga dilay 10 askari waxaana lagaga dhaawacy 5 kale. Isla taariikhdan ayaa waxaa lagu qaaday weerar habeenimo goob ay ciidamada cadawgu ku daawanayeen TV degmada Birqod, waxaana cagta la mariyay dhamaan ciidankii meeshaa joogay iyo dhismihii ay ku jireen oo la baabi’yay halkaasoo loogu gaystay khaasre laxaadle.
1/11/2011 Dagaal ka dhacay Darguudo oo ka tirsan degmada Iimay- Bari waxaa cadawga lagaga dilay 1askari .
4/11/2011 Mar ay CWXO wadada u galeen baabur cadaw oo maraysay wadada isku xidha Qoraxay iyo Jarar waxaa meesha loo yaqaan Sandixiile lagaga gubay ciidamada cadaw hal baabuur iyo wixii saraa. Isla taariikhdan waxaa dagaal kale uu ka dhacay baliga Cali qaasin oo u dhaxeeya Dalaad iyo Wabiyar oo ka wada tirsan degmada Qabridahar waxaa ciidamada cadawga lagaga dilay 3 askari tira kalana waa lagaga dhawaacay , sidoo kale waxa jira in habeenimadii isla taarikhdan cadawga lagu miray Hora-haw doo ka tirsan jigjiga. Waxaa kaloo taariikhdaa uu dagaal ka dhacay Caado halkaasoo cadawga lagaga dilay 4 askari waxaana lagaga dhaawacay 3 askari oo kale
5/11/2011 Wuxuu dagaal ka dhacay Yucub kaas oo cadawga lagaga dilay 5 askari lagagana dhaawacay 3 askari oo kale
6/11/2011 Dagaal ka dhacay Ganbadh xodayle oo ka tirsan deegaanka Qoraxya waxaa ciidamada cadawga lagaga dilay 6 askari tira kalana waa lagaga dhawaacay
Sidoo kale fal gaadmo ah oo laga fuliyay gudaha magaalada Qoriile waxaa suuqa magaalada lagu toogtay hal askari
7/11/2011 Dagaal ka dhacay Walwaal oo ka tirsan deegaanka doollo waxaa ciidamada cadawga lagaga dilay 3 askari
Inta badan marka ay cadawga ka soo gaadhaan dhibaatooyin dhinaca dagaalada ayaa waxa uu dib ugu gadoodaa maatida iyo dadka shacabka ah kuwaas oo uu qaarna xidhxidho qaarna laayo kuwana uu jidhdil iyo kufsi u gaysto. Dambiyadan uu shacabka u gaystay cadawga ayaa meel badan ka dhacay sida ay wararka nugu soo gaadheen, waxaadna ka dhagaysan doontaan iyadoo tafatiran idaacadaha.